Mar Wuxuu ahaa mid ka mid ah Xiddigaha ugu Mushaarka badan Adduunka iminkana waa SHIID OO SHILIN ma heysto….(Bal AQRISO tan qabsatay Asamoah Gyan) – Gool FM
Mar Wuxuu ahaa mid ka mid ah Xiddigaha ugu Mushaarka badan Adduunka iminkana waa SHIID OO SHILIN ma heysto….(Bal AQRISO tan qabsatay Asamoah Gyan)
Byare December 27, 2018
(Europe) 27 Dis 2018. Asamoah Gyan ayaa mar ahaa mid ka mid ah xiddigaha ugu mushaarka badan kubbada cagta adduunka balse iminka waa shiid oo shilin ma heysto oo xitaa reerkiisa lama hadlin muddo afar bilood ah.
Weeraryahankii hore ee Sunderland oo adduun dhan 227,000 oo bound usbuuciiba ka qaadanayay naadiga Shanghai SIPG sanadihii u dhexeeyay 2015 iyo 2017 ayaa iminka la fahansan yahay in Akoonkiisa ay ku jirto 600 bound oo qura mana awoodo inuu cidiisa xitaa masruufo.
33-jirka reer Ghana ayaa hadda ka tirsan naadiga reer Turkish ee Kayserispor balse wuxuu carabka ku adkeeyay inaan mushaar la siin.
Sida uu warinayo MyNewsGh.com, Kabtanka Ghana ayaa la waydiiyay haddii uu Akoomo kale ku leeyahay dalalka uu ka soo ciyaaray.
Laakiin, Akoonka kaliya uu qabo waa midka Turkiga uga furan waana mid maran.
Tan iyo markii uu ka soo tagay Sunderland 2012, Gyan ayaa saddex sano ku qaatay naadiga Al Ain ee isku taga imaaraadka Carabta, halkaa uu usbuuciiba ku qaadanayay 200,000 oo bound wuxuuna dhaliyay 123-gool 120 kulan uu u saftay.
Intaa kaddib mushaar kale oo waali ah uyuu ka helay horyaalka Shiinaha isagoona 2015 iyo 2016 ku soo qaatay naadiga Shanghai SIPG ka hor inta uusan ku soo laaban Carabta gaar ahaan naadiga Shabab Al-Ahli ee ka dhisan Dubai.
Laakiin howsha ayaa mar qura is gadisay kadddib markii uu u soo dhaqaaqay horyaalka Turkiga sanadkii tagay.
Ilow wareedyo laga helay Qoyskiisa ayaa tibaaxaya inuusan la soo hadlin xaaskiisa iyo saddexdiisa caruur tan iyo bishii Agoosto, xitaa waqtiga fasaxa Ciida Gaalada kolkaa uu sida caadiga ah soo booqan jiray, Caruurtiisa ayaana la fahansan yahay inay ka walaacsan yihiin halka uu ku sugan yahay Aabahood.
Gyan kama jawaabayo wicitaanada qoyskiisa lamana oga haddii uu ugu tala galay iyo in kale, waxaase la sheegayaa inuu sugayo Tijaabo Dhiig DNA oo laga qaadayo reerkiisa si loo xaqiijiyo, DNA-ga ayaana la qorsheeyay in la qaado horaanta bisha Janaayo.
Markii hore waxaa la mooday in Gyan uu isagu codsaday in la qaado DNA balse waxaa iminka la fahsan yahay in walaalkii ka wayn ee Baffuor uu yahay shaqsiga codsigaas dhiibay.
Gyan ayaa xaaskiisa Gifty la kulmay 2002 waxayna si rasmi ah isku guursadeen 2013.
Uurkii ugu horreeyay ayay qaaday 2005 iyadoona dhashay canugii ugu horreeyay oo loo bixiyay Frederick Asamoah.
Laakiin iminka weeraryahankii hore ee Udinese kaa oo lagu xusuuso ogyahay Rigooradii uu ka khasaariyay xulkiisa Ghana koobkii adduunka ee 2010 kaddib markii uu Luis Suarez gacanta ku taabtay kubbada ayaa buuxinaya Fayl uu ku doonayo inuu ku tir-tiro guurkiisa si uu markale u galo guur Cusub oo la galayo Nina Atalah oo lagu sheegay saaxiibtiis.
Marka laga soo tago Kubadda Cagta, Gyan waxa uu isku dayey dalacsiin dhanka feerka ah sanadii 2012-da.
Sanadkii 2017-dana, waxaa la sheegay in ay Shirkada Duulista Hawada Ghana siisay sharciyada Duulista Hawada, maadaama uu qorsheynayay in uu daahfuro diyaaradiisa gaarka ah.
W/D: Abdisamed Mohamed Hassan. (Black Yare).